Android နှင့် IOS အတွက်ကြိုးမဲ့ USB ဖြစ်သော SanDisk Connect Wireless Stick ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပါသည် Gadget သတင်း
Xavi Carrasco | | ပစ္စည်းများ, reviews
သင့်အများအပြားသိသည်နှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခခံရခြင်းကြောင့်များစွာသောထုတ်လုပ်သူများစွာသည်သူတို့၏ဖုန်းများကို micro SD ချဲ့ထွင်သည့် slot တစ်ခုဖြင့်တပ်ဆင်ရန်မရွေးချယ်သောကြောင့်များသောအားဖြင့် multimedia ဖိုင်အမြောက်အမြားကိုကိုင်တွယ်သောအသုံးပြုသူများအတွက်ဗီဒီယိုဖြစ်စေ၊ ဓါတ်ပုံများနှင့်တေးသီချင်းများ ယင်းနှင့်အတူ SanDisk ခ်ိတ္ဆက္ပါ ကြိုးမဲ့ တုတ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ခဲ့ပါ လွယ်ကူသော ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်း၏စွမ်းရည်ကိုချဲ့ထွင်။
SanDisk မှတည်ဆောက်ထားသည့်ဤကိရိယာသည် multimedia အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကို၎င်းကို၎င်း၏အက်ပလီကေးရှင်းမှကြိုးမဲ့ဖြင့်ပျော်ရွှင်စွာခံစားခွင့်ပြုသည် Android နှင့် iOS နှစ်ခုလုံးတွင်ရနိုင်သည်။ SanDisk သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက် Flash Storage Drives များထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအထူးပြုသည်။ Rထိရောက်စွာ ကဝယ်ယူခဲ့သည် Western Digital, ထုတ်လုပ်သူ ကမ္ဘာ့ hard drivesအီလက်ထရွန်းနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရှည်လျားသောသမိုင်းနှင့်အတူ။ ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကြောင့်လူကြိုက်များသော SanDisk တံဆိပ်သည်အနောက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကော်ပိုရေးရှင်းတွင်၎င်း၏အမည်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မည်။
2 SanDisk Connect Wireless Stick ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်
3 SanDisk APP သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးသုံးစွဲရလွယ်ကူပြီးအသုံးဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များလည်းရှိသည်။
4 SanDisk Connect Wireless Stick ဟာ USB Stick တစ်ခုပါ
6 ဤကိရိယာ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သည် ၄.၅ နာရီဖြစ်သည်
7 အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစား 16GB, 32GB, 64GB နှင့် 128GB အမျိုးမျိုးရရှိနိုင်သည်
ကိရိယာ built en အနက်ရောင် polycarbonate ကြော့ရှင်းနှင့်အရည်အသွေး exudesSanDisk ၏ထုတ်ကုန်လိုင်းတွင်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်သည်၎င်း၏အရှေ့ဘက်တွင်အလင်းရောင်ကျပုံပေါ် မူတည်၍ cube ပုံစံများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများနှင့်အတူ hexagons ဒီဇိုင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ SanDisk Ultra USB။ ဒီရှေ့မျက်နှာစာပေါ်လာတယ် အဖြူရောင် ဦး ဆောင်သည် ငါတို့အားအဘယ်အရာကိုပေးမည်နည်း တုံ့ပြန်ချက် အပေါ် ဘာဖြစ်သလဲá device ကိုမှဖြစ်ပျက်။ ဒီအဖြူရောင် ဦး ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးရယ်စရာကောင်းတာက Connect Wireless Stick ကိုပိတ်ထားလျှင်လုံးဝမမြင်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ညာဘက်အခြမ်းတွင်ငါတို့ရှာပါ el ကြယ်သီး မီးတောက်, fáမကျြတောငျမှေး နှိပ်ရန် y လှည့် ခက်ခဲသည်မကျြတောငျမှေး ဒီအားဖြင့်ဖြစ်ပျက် အမှား။ နောက်ကျောဘက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် loop တစ်ခုကို SanDisk ၏ကြိုးမဲ့ယူနစ်တွင်သိမ်းဆည်းထားလိုသောသမားရိုးကျ USB ချောင်းများ၏ဂန္ထဝင်ထူးခြားသည့်လက္ခဏာတစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သော့များနှင့်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုချိတ်ဆက်ရန်နေရာချနိုင်သည်။
ကျွန်တော်အဖုံးကိုအထူးဖော်ပြချင်ပါတယ်၊ အဲဒါကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်လို့တစ်ခုပါ။ la ပြင်ပဖြစ်သော, es ပလပ်စတစ် t ကို၏ပွင့်လင်း ကြီးစွာသောခုခံခြင်းနှင့် အခြား la အတွင်းဖြစ်သောဒါဟာဖြစ်ပါသည် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးáအချစ် y protege USB ကိုအမျိုးအစား A connector ကို။ အကယ်၍ သင်သည်ဤအဖုံးကိုဆုံးရှုံးလျှင်သင်၏အမှားကြောင့်သေချာပေါက်ဖြစ်နိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းစွာကိုက်ညီသောကြောင့်၎င်းသည်ပြုတ်ကျရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
အစီအမံ del SanDisk ခ်ိတ္ဆက္ပါ ကြိုးမဲ့ တုတ် သား အကျယ် ၁၉၁ မီလီမီတာ၊ y 95mm အထူ။ လက်ရှိစျေးကွက်တွင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်သမားရိုးကျ pendrives များထက်ကြီးမားသောအရာတစ်ခုရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတွင်ကိုယ်ထည်အောက်ရှိဘက်ထရီ၊ အင်တင်နာနှင့် Wifi Controller တို့ပါ ၀ င်သည်ဆိုလျှင်၎င်းသည် ဆက်လက်၍ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်။ ထိခြင်းနှင့်အလေးချိန်ကိုသင်ခံစားမှုကောင်းသည်ဟုပြောနိုင်သည် Que ခက်ခဲပါတယ်.
SanDisk Connect Wireless Stick ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်
SanDisk Connect Wireless Stick ၏အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုမှာတိကျသော APP မှတဆင့် iOS နှင့် Android နှင့်လိုက်ဖက်သောကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ အထက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ကိရိယာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်ဘေးဘက်ရှိပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ရုံဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal သို့မဟုတ် tablet မှကြိုးမဲ့ Stick ထောက်ပံ့သော Wifi ကွန်ယက်ကိုရှာဖွေပြီးဆက်သွယ်ပါ။ သိသာထင်ရှားတဲ့aposteriori SSID ကိုပြောင်းနိုင်သည်။ကွန်ယက်အမည်) နှင့်စကားဝှက်ကို assign ငါတို့သာဆက်သွယ်ချင်တဲ့သူပဲ
SanDisk APP သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးသုံးစွဲရလွယ်ကူပြီးအသုံးဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များလည်းရှိသည်။
ချိတ်ဆက်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် SanDisk APP မှတဆင့်အကြောင်းအရာကိုရယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုအကွာအဝေးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ Pကံကောင်းတာကအသုံးပြုရန်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိသည်။ Application menu တွင် SanDisk Connect Wireless Stick ကို Wifi ကွန်ယက်တစ်ခုသို့ချိတ်ဆက်ခြင်းကဲ့သို့သောအလွန်အဆင်ပြေသောအင်္ဂါရပ်များကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်စက်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ တစ်ချိန်တည်းမှာဆက်နေရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ငါတို့မရှုံးဘူး la ကွန်နက်ရှင် ငါကိုnternet de ငါတို့ရဲ့ Wi။ သူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းကင်မရာကိုလှည့်ကွက်တွေအများကြီးပေးတဲ့သုံးစွဲသူတွေအရမ်းတန်ဖိုးထားလေးမြတ်တဲ့နောက်အင်္ဂါတစ်ခုကလုပ်ခြင်းပဲ backup လုပ်ထားသည် vuestra ပုံပြခန်းပုံများကိုကွန်ပျူတာသို့ကူးပြောင်းခြင်း၊ သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်လွယ်ကူစွာအရန်ကူးခြင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
SanDisk Connect Wireless Stick ဟာ USB Stick တစ်ခုပါ
မျက်နှာသာပေးရမယ့်အချက်တစ်ခုကဒီ SanDisk Connect drive ရဲ့ drive ဟာ USB 3.0 pendrive ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည် ဖိုင်ကိုကွန်ပျူတာနှင့်အဆင်ပြေစွာ upload လုပ်နိုင်တယ် သူတို့ကိုဒီကနေဒီကိုခေါ်ဆောင်သွားဖို့ဒါမှမဟုတ်စမတ်ဖုန်းကနေပျော်မွေ့ဖို့။
ဤသည်ရှိသည်ဖို့အဆင်ပြေနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် ဆာဗာအနည်းငယ် ဒေသအလိုက်ဖိုင်များအမျိုးမျိုးကိုမျှဝေရန်။ ယခုအချိန်အထိပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကမ္ဘာအတွက်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုအကြီးအကျယ်တိုးမြှင့်ပေးသည့်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်နိုင်ချေများစွာရှိသည်။
ဤကိရိယာ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သည် ၄.၅ နာရီဖြစ်သည်
အကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာစက်တစ်ခုတည်းနှင့်ချိတ်ဆက်လျှင် ၄.၅ နာရီဆက်တိုက်အသုံးပြုနိုင်သည် မသည်သူ၏ခိုင်မာတဲ့အချက်သို့သော်အသေးစားငွေပေးချေမှုအဆင့်တွင်ဖိုင်ရယူခြင်းကိုလေးနာရီခွဲကြာသည် ရုပ်ရှင်တစ်ခုလုံးကိုစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲကြည့်ရှုရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးထားသည်.
အားသွင်းခြင်းသည်အတော်လေးမြန်သည် ၂ နာရီအတွင်းယူနစ် ၁၀၀% ရှိသည် အသုံးပြုမှုကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သလောက်တိုးချဲ့နိုင်ရန်အတွက်၎င်းကို socket တစ်ခုသို့မဟုတ် powerbank တစ်ခုနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစား 16GB, 32GB, 64GB နှင့် 128GB အမျိုးမျိုးရရှိနိုင်သည်
SanDisk Connect Wirless Stick သည်စွမ်းဆောင်ရည်အမျိုးမျိုးနှင့်သင့်တော်ပြီးဈေးနှုန်းချိုသာစွာရရှိနိုင်သည်။ 16GB ယူရို ၃၀ အတွက်, 32 ဂီဂါဘိုက် ယူရို ၃၀ အတွက်, 64GB အားဖြင့် 50 € နှင့် 128GB € 80 သည်။
SanDisk Connect ကိုကြိုးမဲ့ Stick
သုံးသပ်ချက် - Xavi Carrasco
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » ပစ္စည်းများ » Android နှင့် IOS အတွက်ကြိုးမဲ့ USB ဖြစ်သော SanDisk Connect Wireless Stick ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပါသည်
မျက်နှာပြင်သေးငယ်တဲ့စမတ်ဖုန်း ၅ လုံး
နည်းပညာကုမ္ပဏီများသည်အသုံးပြုသူများ၏ privacy ကိုမျက်နှာသာပေးသည်